कम्तिमा कम्युनिष्ट नीति सिद्धान्तको लाज त राख, सरकार ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
कम्तिमा कम्युनिष्ट नीति सिद्धान्तको लाज त राख, सरकार !
– शारदा शर्मा
व्यवस्था बदल्न हिंडेको छोरा घर नफर्के पछि कुइनाले हानेर पहरो कहाँ भत्किन्छ भन्नेहरुलाई मेरी हजुरआमाले उतिबेलै जवाफ दिनुहुन्थ्यो । जनताको लागि लड्न हिडेको मेरो छोरो कम्युनिष्ट हो । कम्युनिष्टले जनताको काम गर्छ, घर नभएका निमुखा जनताको सेवा गर्छ । मान्छे मान्छे एउटै हुने लडाइ लड्छ ।
एकदिन जनताको शासन आउने छ हेर । हजुरआमाले जानेर बुझेर भनिन् या छोराको मायाले भनिन् । आज उनी छैनन् । तर उनले भनेजस्ता धेरै घटनाहरु घटेका छन् । जनताले भगवान मानेका राजालाई घुँडाटेक्न बाध्य बनाए । देशमा परिवर्तन भयो । व्यवस्था बदलियो, शासक बदलिए, तर शासन उही र उस्तै रह्यो । जनताको लागि लडेका हौं भन्नेहरु जनताकै ढाड सेक्न तयार बने । जानेर नजानेर जनताको लागि गरिएको लडाइले सीमित ब्यक्तिलाई झन् शक्तिशाली बनाइदियो । सडकबाट सदनसम्म पुग्दा स्वर्ग देखेका कम्युनिष्टहरु तिरमिर बने । जताततै पैसा र पदका भागबण्डामा जनता सम्म पुग्दा त कमिसन र लेनदेनले आँखै तिरमिराउने त्रिबेणीं बन्यो । पद र पैसाले इमानको खरिदबिक्री हुंदैजाँदा समाजमा यतिधेरै अपराध बढ्योकी ब्यभिचारी, दुराचारी र अपराधीहरुको अखडाबाहेकका निकायहरु निकम्बा बन्दै गए । जसले गर्दा समाजमा आदर, सम्मान, सम्बन्ध, भावना जस्ता कुराहरुको दिनदहाडै चिरहरण हुन पुग्यो।
यस्तै कारणले गर्दा समाजमा अपराध बढ्दै गएको छ । दिनानुदिन मान्छे मान्छेबाट जनावरको रुपमा परिणत हुंदैछ । घरघरमा हत्या बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरु बढ्दै गएका छन । कसैलाई डर छैन अपराध गरे पनि पावर, पैसा र पदको प्रयोग गरेर पीडितलाई झनै पीडा दिने काम भैरहेको छ । जनतालाई सजिलो सहज परिवेश बनाएर राहत दिने भन्दा पनि हरेक ठाउमा पीडा आज पनि जस्ताको तस्तै छ । देश संघियतामा गएको छ । जनताको काम गर्न सजिलो हुने भनेर अनेक छोटेराजाहरु खडा गरेर उनीहरुको राज चलाउने काम मात्र भएको छ । आफ्ना छोरी चेलीहरुको इज्लुजत लुटेर इहलिला समाप्त पारिदिने हरु पावर र पैसाले मातिएर प्रमाण नष्ट गरेको देख्दा समेत राज्य चुप रहनु, र अनगिन्ती नाटक मञ्चन गर्नुले जनताको लागि लडेका हौ भन्ने कम्युनिष्टहरुको धज्जी उडेको छ । जव निजी स्वार्थ पुरा गर्न बिचारको ब्यापार हुन थाल्छ सिद्धान्त, नीति र निष्ठाको समेत बलात्कार हुने रहेछ ।
सा“च्चै नढाटी भन्नु पर्दा कञ्चनपुरकी अबोध निर्मलाको मात्र बलात्कार पछि हत्या भएको छैन आज कम्युनिष्टका निती र सिद्यान्तको पनि हत्या भएको छ ।त्यतिखेर कम्युनिष्ट हरुले जातपात भन्दैनन, दिदी बहिनी भन्दैन्न सबै सम्मै हुन्छ भनेर बिरोधीले गर्ने र टिप्पणीको पसिना आउन्जेल बिरोध गर्ने मेरी हजुरआमा आज जिवित भए कति निशब्द, र स्तब्ध बन्ने थिइन होला । समाजमा राम्रो काम गर्छन, देश बनाउछन् , जनताको लागि काम गर्छन, अन्याय अत्याचारको बिरोध गर्छन, भ्रष्ट्रचार कमिसन खोर , लुटेरा, हत्यारा र ब्यभिभारीको उन्मुलन गर्छन् भन्ने कम्युनिष्टहरुले नै शासन गरेको देशमा दिन दहाडै छोरीचेलीको इज्यत लुट्ने अपराधीले प्रमाण नष्ट गरेको देख्दा समेत मौन रहनु , अनेक नाटक मन्चन हुनुले हाम्रा शासकहरु कम्युनिष्ट त के मानविय संवेदना समेत हराएका खोक्रा मान्छेहरु मात्र त हैनन आशंका उब्जिनु स्वभाविक हो ।
देश बनाउन शासकहरुले डिक्टेटरसिप लगाउन परेपनि पछि पर्न नहुने रहेछ । देश र जनताको लागि जनताको सुख र समृद्धिको लागि एउटा शासक डिक्टेटरनै बन्नु पर्छ भन्ने कुरा सायद सा“चै पनि रहेछ । आज देश अराजकताले रुमलिएको छ । घर, समाज र देश कहिं कतै सुरक्षित छैन । छोरीचेलीहरुको दिनदहनडै आफ्नै घरमा चिरहरंण भएको छ । न सुरक्षा छ , न शान्ति । न अपराधीलाई कार्वाही । अपराध गर्ने देशको अगुवा हुन्छ, समाजको चल्ताफूर्ता, नेता हुन्छ, कार्यकर्ता हुन्छ, शिक्षा सिकाउने शिक्षक हुन्छ, सुचना दिने संचारकर्मी हुन्छ, जनतालाई सुरक्षा दिने सुरक्षाकर्मी हुन्छ । पहु“च वाला, पावर वाला, पैसा वाला । कार्वाही हुने कुरै भएन । सरासर बुझिने कञ्चनपुर घटनालाई त यसरी गुमराह मा परिदैछ भने अरुले न्याय कसरी पाउलान रु हिजो मात्र समाचार आयो एउटा तेल कम्पनीलाई गुणस्तर भएन भनेर मन्त्रीले बन्द गर्ने आदेश दिएछन् । जनता उनको कामले खुसी पनि भए । जनताका मन्त्रीले यति त हिम्मत देखाएछन । तर उतिनै बेला तेल गुणस्तर हिन हैन रहेछ । खान योग्य रहेछ भन्ने समाचार आयो । यसको मतलब मन्त्री र तेल मालिक बिच पक्कै पनि लेनदेन मिलेन । यस्तो निकम्मा राज्य व्यवस्थामा छौ हामी रु
पावरमा भए पछि शक्तिमा भए पछि उनिहरुले गरेका अपराधका समाचार लेख्दा एउटा संचारकर्मी कठघेरामा उभिनु पर्छ तर अपराधी खुलेआम हिडछन् । साना भन्दा साना काम गर्दिए बापत कमिसन लिन्छन जनताको लागि काम गर्छौ भन्नेहरु । अनि कहा“ छ सुशासन रु अनि कसरी सम्भव छ समृद्धि रु रातारात काम नगरी धनी हुनुछ मान्छेहरुलाई । सवैभन्दा सजिलो दाम कमाउने उपाय राजनीति गर्छु भन्ने र जनताको काम गरेको बहानामा कमिसन लिने सजिलो काम । पैसा नभए सम्म राजनीति गर्छौ भन्नेहरुले कसैको सानो काम पनि गर्न नहुने, पैसाको कारोवार नहुने देखेपछि बोल्न पनि नहुने हाम्रो राजनीतिक संस्कार बनिसकेको बर्तमानमा कहां खोज्ने सुरक्षा रु कहा“ खोज्ने शान्ति रु र कहा“ खोज्ने जनताले शुसासन रु दिनदहाडै आफ्ना छोरी चेलीहरुको इज्यत लुटिदा अपराधीलाई कारबाही गराउन समेत यति धेरै याचना गर्नु पर्ने परिस्थितिमा कसरी सुशासन कायम होला रु सा“च्चै देशमा अराजकता बढनु, हिंसा बढ्नु यी र यस्तै कारणले गर्दा नै हो । अपराध गर्न हुदैन संजाय हुन्छ भन्ने नै छैन ।
जस्तो अपराध गरेपनि लेनदेनमा मिलिहाल्छ भन्ने सोचको बिकास भएकै कारण समाजमा अपराध बढेका छन । अपराधी चाहे जो सुकै किन नहुन कडा भन्दा कारबाही गर्ने र समाजमा त्यस्तालाई घृणा गर्दै जाने हो भने मात्र यस्ता घटनाहरु कम होलान हैन भने त यो अपराधको श्रृङखला झनै बढ्दै जानेछ । सरकार कम्तिमा पनि कम्युनिष्ट निती सिद्धान्तको लाज त राख । जनतालाई बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित र सुरक्षित बनाउ । जघन्य अपराध गर्ने अपराधी जो सुकै हुन् कारबाही गर्न नडराउ ।